Joe Biden oo hal sano ku kordhiyey cunaqabteyntii Mareykanka ee Soomaaliya - Caasimada Online
Home Warar Joe Biden oo hal sano ku kordhiyey cunaqabteyntii Mareykanka ee Soomaaliya
Joe Biden oo hal sano ku kordhiyey cunaqabteyntii Mareykanka ee Soomaaliya
Washington (Caasimada Online) – Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa saxiixay amar madaxweyne oo muddo sanad ah ku kordhinaya cunaqabateynada Mareykanka uu kusoo rogay Soomaaliya, kuwaas oo ay horey u saxiixeen madaxweyne Obama iyo Trump, sida uu sheegay Aqalka Cad.
Amarkan ayaa sidoo kale reebaya in la is-hortaago gaarsiinta gargaarka bani’aadannimo dadka Soomaalida ee u baahan.
Wuxuu beegsanayaa shaqsiyaadka loo arko inay amraan ama ka qeyb qaataan ficillo rabshado oo ka dhan ah shacabka Soomaaliyeed, kuwaas oo ay ku jiraan dilka, kufsiga, xadgudubyada jinsiga ku dhisan, weerarada iskuullada iyo isbitaalada, afduubka iyo barakicinta.
Amarka ayaa sidoo kale diidaya inay hoggaamiyayaasha siyaasadeed iyo kuwa militari ee Soomaaliya ay caruurta u qortaan askar ahaan, iyo in si toos ama aan toos aheyn loogu lug yeesho u dhoofinta ama ka dhoofinta dhuxusha ee Soomaaliya, iyo qodobo kale.
Amarkan waxaa horey loogu beegsaday oo uu xayiraado ugu soo rogay ururka Al-Shabaab iyo shaqsiyaad badan oo kooxdaas ka tirsan ama ka tirsanaa.
Kordhinta xayiraadda Soomaaliya ayaa kusoo aadeyso xilli Farmaajo uu ka dhamaaday muddo xileedkiisa, islamarkaasna illaa hadda lagu heshiin la’yahay qaabka ay u dhaceyso doorashada Soomaaliya.
Dowladda Mareykanka ayaa muddooyinkii dambe waday cadaadis ay madaxda Dowladda iyo kuwa maamul Goboleedyada ku saareyso sidii xal deg deg ah looga gaari lahaa muranka ka taagan doorashada Soomaaliya.
Mareykanka oo horey ugu hanjabay siyaasiyiinta Soomaalida, ayaa qodobkan ku beegsan kara cid kasta oo loo arko inay halis ku tahay amniga Soomaaliya.